Yurub ilaa Aasiya: Baxrayn waxay leedahay Hubka saadka ee ugu dhaqsaha badan Badda-ilaa-Hawada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Yurub ilaa Aasiya: Baxrayn waxay leedahay Hubka saadka ee ugu dhaqsaha badan Badda-ilaa-Hawada
Wararka Baxrayn • Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga!
Boqortooyada Baxreyn waxay billowday xarunta saadka ee gobolka ee ugu dhaqsaha badan ee gobolka oo leh kaliya 2hr waqtiga wareejinta dhammaan weelasha-taasoo la micno ah in badeecadu ay la jiri karto macaamiisha nus-waqtiga iyo 40% qiimaha.
Daahfurka “Bahrain Global Sea-Air Hub” wuxuu ka faa’ideysanayaa labadaba booska Baxreyn ee istiraatiijiga ah ee u dhexeeya suuqyada Yurub iyo Aasiya iyo sidoo kale u dhowaanshaha suuqyada bartilmaameedka ee gobolka iyada oo la aasaasayo xarun wax-ku-beddelka hawo-baddeedka badan ee gobolka oo leh gaaraan caalamka.
Xaruntu waxay ku tiirsan tahay habraacyada nadiifinta oo la fududeeyay, saadka la hagaajiyay, iyo digitization buuxa si loo gaaro waqtiga hogaaminta dhammaadka ilaa dhammaadka oo kaliya wax ka yar laba saacadood alaabooyinka ka soo degaya Madaarka Caalamiga ah ee Baxrayn una sii gudbaya Dekedda Khalifa bin Salmaan, iyo sida kale.
Faa'iidooyinkaasi waxay u tarjumayaan 50% dhimista celceliska waqtiga hogaaminta marka la barbar dhigo xamuulka badda ee saafiga ah iyo 40% dhimista kharashka marka loo eego xamuulka hawada saafiga ah. Sidaas darteed, xarunta hawada ee Baxrayn waxay u adeegtaa beddel qiimo leh soo-saareyaasha iyo kuwa ka-hor-taga xamuulka, gaar ahaan marka la eego xiisadda maraakiibta ee socota.
Baxreyn waxay siin doontaa maqaam-wadaagahan hindisahan dhammaan suuqyada adduunka oo dhan taas oo u oggolaan doonta inay siiyaan shirkadohooda ku-saleysan qaranka fursad ay ku noqdaan Shipper aamin ah oo la oggolaaday oo ku yaal xarunta sahayda badda-ilaa-hawada ee Baxrayn.
Wasiirka Gaadiidka iyo Isgaarsiinta Baxreyn, Mudane Kamaal bin Axmed ayaa yiri:
“Daahfurka xaruntan Saadka Caalamiga ah ee Hawada-Hawada, oo ah tan ugu dhaqsaha badan Bariga Dhexe, halkan Baxrayn waa fursad dhab ah oo aan ahayn oo keliya shirkadaha saadka adduunka laakiin sidoo kale kuwa wax dhoofiya adduunka oo dhan. Adeegani wuxuu horseedi karaa 40% kaydka kharashka marka la barbar dhigo xamuulka hawada oo kaliya iyo 50% waqtiyada rasaasta ka dhakhso badan xamuulka badda saafi ah. ”
Wuxuu intaas ku daray: "Waxaan tan u samayn karnaa oo kaliya sababta oo ah mowqifkeenna gaarka ah, u dhowaanshaha dekadahayaga, iyo sidoo kale xeer-ilaaliyaasheena, hawl-wadeennada iyo maamulka dekedaha oo si dhow u wada shaqeynaya iyo xalka casriga ah ee farsamaynta dhijitaalka ah."
Xaruntani waxay awood u siin doontaa koritaanka qaybta saadka Bahrain taas oo gacan ka geysan doonta in la sii kala duwo dhaqaalaha Boqortooyada. Kobaca wax-soosaarka batroolka ee Baxrayn sanad walba wuxuu gaadhay 7.8% Q2 sanadka 2021.
Qiimaha hawlgalka ee qaybta saadka ayaa 45% ka hooseeya Bahrain marka loo eego suuqyada deriska ah, sida ku xusan warbixinta KPMG 2019 “Qiimaha Sameynta Ganacsiga Saadka”. Tani waxay Baxreyn u dhigtay meel soo jiidasho leh oo loogu talagalay ganacsiyada caalamiga ah iyo kuwa gobolka ee ka dhex shaqeeya waaxda.
Ku saabsan Wasaaradda Gaadiidka iyo Isgaarsiinta (MTT)
Wasaaradda Gaadiidka iyo Isgaarsiinta Baxrayn (MTT) waa hay'adda dawladda ee mas'uul ka ah horumarinta iyo nidaaminta kaabayaasha iyo nidaamyada isgaarsiinta ee Boqortooyada.
Ujeeddada guud ee kor u qaadista tayada nolosha iyo fududeynta dhaqdhaqaaqa dadka iyo badeecadaha iyada oo loo marayo gaadiidka dhulka, badda, iyo hawada iyadoo la waafajinayo Aragtida Dhaqaale ee 2030, MTT waxaa loo xilsaaray inay horumariso gaadiid habaysan oo waara iyo warshadaha isgaarsiinta si ay u taageeraan Boqortooyada koboca dhaqaalaha.